Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay “SAWIRRO” | Baydhabo Online
Mogadishu, 07 May 2016 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Madaxweynaha oo xariga ka jaray xarumaha Wasaaradaha Shaqada iyo Howlaha Guud, Maxkamada Sare ee Ciidamada oo xukun dil ah ku riday dambiilayaashii qaraxa ka geystey Baydhabo 28kii Feberaayo 2016, Ciidanka XDS oo Al-Shabaab ka saaray deegaanada Gobolka Sh/Dhexe, Hub iyo danbiilayaal laga soo qabqabtay degmada Yaaqshiid, Wajigii labaad ee Garoonka Diyaaradaha Boosaaso oo la daahfuray, Waddooyin muhiim ah ee degmada Hodon oo dib-loo furay, Xog-ururinta (SD seismic data) dhul badeedka koofurta oo la soo gabogabeeyey, Ciidanka XDS oo bur-buriyey saldhig lagu tababaro Daacish, Tababar Aqoon Kororsi ah oo loo furay saraakiisha Booliska iyo Suuq cusub oo laga hirgeliyey magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha oo xariga ka jaray xarumaha Wasaaradaha Shaqada iyo Howlaha Guud
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 1dii May 2016 xarigga ka jaray xarumaha Wasaaradda Shaqada & Arrimaha bulshada iyo tan Howlaha Guud & Guriyeynta oo dhawaan dib u dhis lagu sameeyay. Madaxweynaha oo ay wehliyaan xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, Guddoomiyaha gobolka Benaadir, Taliyaha ciidanka Booliska iyo mas’uuliyiin kale waxa ay kormeer ku tegeen xarumaha labada Wasaaradood ee kala ah Holwaha Guud iyo Shaqaalaha, waxa uu warbixin ka dhageystay labada Wasaaradood, oo Madaxweynaha u sharxay dib u dhiska lagu sameeyay. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda labada Wasaaradood ku bogaadiyay dib u dhiska ay ku sameeyeen xarumahooda, waxaana mas’uuliyiinta kale ka dalbaday inay dib u dhistaan xarumaha Wasaaradaha ay u magacaaban yihiin. Sidoo kale xarunta Wasaaradda Shaqada iyo arrimaha bulsahda ayaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay xuska maalinta shaqaalaha Adduunka ee 1-da May.
Maxkamada Sare ee Ciidamada oo xukun dil ah ku riday dambiilayaashii qaraxa ka geystey Baydhabo 28kii Feberaayo 2016
Maxkamadda Sare ee Ciidanka Qalabka ayaa 30kii April 2016 xukun dil ah ku riday shan qof oo afar ka mid ah ay ahaayeen kuwii ka dambeeyay qaraxyadii 28-kii Febraayo ka dhacay magaalada Beydhabo ee xarunta gobolka Baay. Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada Liibaan Cali Yarow oo ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay in shanta qof ee falka dilka ah lagu riday uu mid ka mid ah ahaa askari qof rayid ah dil u geystay iyo afar qof oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku lug lahaa qaraxyadii ay dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay Baydhabo. Sidoo kale maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxa ay xukun saddex sano ah ku riday qof kale oo isna soo abaabulay qaraxii Baydhabo ka dhacay.
Ciidanka XDS oo Al-Shabaab ka saaray deegaanada Gobolka Sh/Dhexe
Abaanduulaha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Cali Baashi Maxamed Xaaji oo horkacaya howlgal ciidamada ay ka wadaan deegaanada fara kutirsaka ah ee Al-shabaab ay kaga harsanyihiin gobalka Shabeellaha Dhexe ayaa 5tii May 2016 sheegay in ciidamada ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanno iyo tuulooyin hoostaga degmada Cadale ee Gobalka Sh/dhexe. Abaanduulaha ayaa sheegay in Howlgalka hadda socda ay qaadeen Ciidanka Xoogga dalka isla markaana aysan qeyb ka aheyn Ciidanka AMISOM marka laga reebo talooyinka iyo farsamada uu ku duulayo ciidanka Xoogga.
Hub iyo danbiilayaal laga soo qabqabtay degmada Yaaqshiid
Ciidamada Nabad Sugidda Qaranka oo 5tii May 2016 howlgallo ka sameeyay xaafado ka tirsan demada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay gacanka ku soo dhigeen hub iyo dadkii heystay oo ku sugnaa guri ku yaala Degmada Yaaqshiid. Hubka la soo qabtay ayaa isugu jira qoryaha fudud iyo kuwa culus oo yaalay guri ay dagnaayeen hooyo iyo sadax carruur ah. Waxaana socdo baaritaano lagu xaqiijinaayo cida leh hubka lagu soo qabtay dadkan. Tallaabadaani ayaa ku soo beegmeysa xilli ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinaayo amniga, si looga hortago qatarta kooxaha nabad diidka ee ku howlan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ee aanan waxba galabsan.
Wajigii labaad ee Garoonka Diyaaradaha Boosaaso oo la daahfuray
Munaasabdda daahfurka wajiga labaad ee Garoonka Boosaaso oo la qabtay 2dii May 2016 ayaa waxaa kasoo qayb galay Madaxweynaha Puntland, xubno ka tirsan labada gole ee Puntland, Wasiirka Duulista Hawada ee Soomaaliya, Danjiraha dawladda Talyaaniga u fadhiya dalka Soomaaliya, Danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Xog-hayaha Guud ee urur goboleedka IGAD, Danjiraha Soomaaliya u qaabilsan IGAD, hay’ado ka socdey Qaramada Midoobey, Isimo, culumaa’udiin iyo dadweyne aad u tiro badan. Munaasabadda ayaa ahayd mid looga dhawaaqayey daah-furka wejigii labaad ee Garoonka Caalamiga ah ee Boosaaso oo isugu jira 4-weji oo kala ah 1km oo lagu dari doono waddada ay diyaaraduhu ku ordaan (Runway), Terminal weyn oo lamid ah kuwa caalamiga ah, baarkinadii diyaaraduhu ay istaagi lahaayeen (Parking) oo la sii ballaarin doono iyo nalayntii ama iftiimintii garoonka, si uu u noqdo mid habeen iyo maalin isku si loo adeegsado. Danjiraha dawladda Talyaaniga u fadhiya dalka Soomaaliya Ambassador Fabrezio Mercelli ayaa ballan qaaday in mashruucaan oo ka kooban 4-ta weji ay dawladda Talyaanigu dhaqaalaha ku baxaya hal mar sii wada deyn doonto, isla markaana ay fulinta mashruucan u wakiilan doonto urur goboleedka IGAD. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dawladda Puntland ay aad usoo dhoweynayso uguna faraxsantahay taageerada lixaadka leh ee ay dawladda Talyaanigu siinayso Puntland, isagoona intaa sii raaciyey in dawladda Puntland iyo shacabkeeduba aanay iloobi doonin garab istaagga ay ka heleen dawladda Talyaaniga xilli ay aad ugu baahan yihiin.
Waddooyin muhiim ah ee degmada Hodon oo dib-loo furay
Waddooyinkan isku xira laamiga hor mara Isbitaalka Digfeer iyo tan wadada Wadnaha ee magaalada Muqdisho oo xirneyd, islamarkanaa si sharci darro ah loo dhistay ayaa maamulka degmada Hodan ee gobolka benaadir uu 4tii May 2016 ku guuleystay in uu dib u furo waddooyinkan oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Maamulka Degmada Hodan ayaa sheegay in tani ay qeyb ka tahay fulinta awaamiirtii ka soo baxday duqa Muqdisho oo ah in dib loo furo waddooyinka muhiimka ah ee ku yaala xaafadaha, waxaana maamulka degmada Hodan ay ku qaadatay dib u furista wadooyinkan muddo 20 cisho ah. Wadooyinka la furay ayaa gaaraya ilaa 10 wado oo isku xirta cisbitaalka digfeer iyo wadada wadanaha.
Xog-ururinta (SD seismic data) dhul badeedka koofurta oo la soo gabogabeeyey
Shirkada Spectrum ASA waxay si guul ah kusoo gaba-gabeysay xog uruurintii (2D seismic data) dhul badeedka Koonfurta Soomaaliya. Waxay ahayd 5 September 2015 markii Dowladda Federaalka Soomaaliyeed (DFS) iyo shirkada Spectrum ASA ay heshiis xog uruurin ah wada galeen. Dhul badeedka xogta laga aruuriyay waa 20,582.75 Km. Xogtaan cusub wax ay kaabi doontaa xog badeed hore oo dhan 20,000 km taas oo la soo aruuriyay 2014. Labada xog waxay sahlayaan in daraasad gun fog lagu sameeyo rajada shidaal ee ku jirta badda Soomaaliyeed. Shirkadda Spectrum waxay bilowday in ay fasirto xogtaas oo diyaar noqonaysa qaybaha danbe ee sanadkaan. Waxaa intaa dheer, 7 qof oo bartay cilmiga geology (geo-scientists) ayaa ka qayb galay xog uruurinta, kuwaas oo tababbar lagu siiyay sida maraakibta xogta u uruuriyaan. Dadka tababarka soo qaatay waxa ay aadi doonaan Qaahiro Masar, halkaas oo lagu bari doono xarunta Spectrum ku lee dahay sida loo fasiro xogta.
Ciidanka XDS oo bur-buriyey saldhig lagu tababaro Daacish
Cutubyo ka tirsan Ciidamada Kumaandoosta ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa bilowgii May 2016 waxey gabi ahaanba bur-buriyeen Saldhig lagu tababbaro maleyshiyaad ka tirsan kooxda Daacish ee ka go’ay dhawaan maleeshiyada Al-Shabaab. Sargaal ka tirsan Taliska ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen bur burinta xarumo dhowr ah oo lagu tababari jiray daacishta cusub ee Soomaaliya, waxa uuna xusay in haatan ay ku baadi joogaan horjoogayaasha kooxdaas ee ku dhuumaaleysanaya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Sargaalkaasi waxa uu intaa ku daray in ay gacanta ku hayaan maleeshiyaad ay soo qabqabteen, iyagoo sidoo kale soo uruuriyay meydadka horjoogayaal Ajaanib ah.
Tababar Aqoon Kororsi ah oo loo furay saraakiisha Booliska
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa 3dii May 2016 tababbar aqoon korosi ah u furay afartan Sarkaal oo ka tirsan Ciidanka Booliska, kaasi oo qeyb ka ah sare u qaadidda aqoonta Saraakiisha. Qaar ka mid ah saraakiisha ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin tababbarkan loo qabtay, ayna diyaar u yihiin in waxyaabaha ay ka bartaan ay ku dabaqi doonaan howlaha ay ugu adeegayaan bulshada. Sareeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa kula dardaarmay Saraakiisha in ay cadaallada iyo sharciga ay ku shaqeeyaan, waxa uuna xusay Taliyaha in dhaqaalaha ku baxayo uusan aheyn mid hay’ad ugu deeqday balse uu yahay mid iyaga jeebkooda ay ka bixinayaan.
Suuq cusub oo laga hirgeliyey magaalada Gaalkacyo
Suuq cusub oo loogu tala galay in lagu iibiyo hilibka iyo qudrada isla markaana maamulka Dagmada Galkacyo ee Galmudug uu ka hirgaliyay bartamaha Suuqa weyn ee magaaladaasi ayaa 2dii May 2016 waxaa si rasmi ah xarigga uga jaray Duqa degmada Galkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo ay wehliyeen mas’uuliyiin ka tirsan golaha deegaanka dagmada Galkacyo. Xirsi Yuusuf Barre ayaa faah faahin ka bixiyay ujeedada loo dhisay suqaan iyo ahmiyada uu u leeyahay bulshada Galkacyo, sheegeyna in suuqa lagu dhisay canshuurtii dadka laga aruuriyey. Hirgalinta suuqan ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyay qeybaha kala duwan ee bulshada ku ganacsata suuqa weyn ee magaalada kuwaasoo qaarkood ahaa kuwa ku ganacsada wadooyinka cariiriga ee dhaxmara suuqa weyn ee Galkacyo.